Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga qubay iPhone / Broken - Waxaad samayn kartaa!
Qaybo ka bajin
Waxaan dooneyso in ay iibiso Waa
1 Ladnaansho iPhone Data
Kabsado iPhone iMessages
Kabsado Messages iPhone
Kabsado iPhone Bookmarks
Kabsado iPhone Voice Memo
Kabsado iPhone Calendar
Kabsado iPhone MMS l
Kabsado iPhone Xusuusin
macruufka 9 Data Recovery
Top macruufka Data Recvoery Software
3 iPhone Dhibaatooyinka
macruufka 9 ee Recovery Mode
Kabsado dhintay iPhone
Ku rid iPhone in Recovery Mode
iPhone Notes Icon baaba'aan
iPhone ma soo celin doonaa,
iPhone xayiran Recovery Mode
Kabsado iPhone Broken
Kabsado Biyaha Waxyeello iPhone
iPhone ku xayiran garoonka Apple Logo
Qaybo ka bajin SIDA LOO ARTICLE
Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga qubay iPhone Broken
Waxa ugu 1da aad sameyn lahayd marka qubay oo ku jaban tahay iPhone
Qubay aad iPhone si xoogan dabaqa, ka jaranjarada ama alaabta kale ee adag? Wax kasta oo dhici kara. Your iPhone weli ku sugan yahay xaalad kaamil ah haddii aad nasiib. Ama ka xun, waxa ay leedahay shaashad dillaac. Xitaa ugu xumaa, waxaad u baahan tahay in la beddelo mid ka mid ah oo cusub. Waxay ku xiran tahay gaadhsiisnaataa Dhibicdii. Arrinta No aad ka tirsan oo ka mid ah, waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa si aad u hesho iPhone leeyihiin jeeg hore. Ha samayn naftaada haddii uu jiro dhaawac halis ah. Keen Apple ama dukaamada xirfadle kale oo maqla waxa ay idinku odhan doonaa. Markaas waxaad go'aansan kartaa sida loo dayactiro iPhone aad jebiyey . Just xusuusto. Haddii aadan si xirfad leh, aad iPhone la sii burburay laga yaabaa in aad qalliin aan habboonayn.
Waxaad u baahan tahay inaad samayso Next: kaabta Your Data
Marka iPhone soo celin baahna, ha iloobin in gurmad xogta ku yaal hore. Marka uu soo celiyo, marna ma ka heli kartaa dib xogta ku yaal, laakiin kaliya ka Lugood ama iCloud gurmad hore haddii aad mid leedahay. Sidaa awgeed, ilaa iyo inta ay jirto xaalad noocan oo kale ah in aad u isticmaali kartaa Lugood / iCloud in gurmad aad hoos iPhone, kaliya waxa ay sameeyaan si degdeg ah.
Maxaa dhacaya haddii aadan isticmaali karin Lugood ama iCloud in gurmad aad iPhone, ama aad kaliya ma rabto in aad isticmaasho mid ka mid iyaga ka mid ah? Markaasay aad u baahan tahay si ay u isticmaalaan qalab dhinac saddexaad sida Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) , kaas oo kuu ogolaanaya in aad si toos ah baarista iPhone iyo aad u hesho xogta ka soo aad iPhone eegista. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa 3 tallaabo:
Tallaabada 1. Isku aad iPhone kombiyuutarka, oo ay maamulaan barnaamijka.
Tallaabada 2. Si toos ah baarista iPhone adigoo gujinaya "Start Scan" ee suuqa kala barnaamijka.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha iyo gurmad kasta oo xogta ku saabsan iPhone in kombiyuutarka.
Maxaa Haddii iPhone gebi ahaanba waa jaban?
Nasiib darro, farsamo xirfadeed leeyahay in iPhone la dhameeyo wada baabbi'iyey. Ma jiro wax si ay u cusboonaysiiyaan, ama lacagta dayactirka waa ku filan si aad u iibsato mid cusub. Waxa aad hadda sameyn kartaa? Waxaad weli dooran kartaa in waxa dib loo by Apple ama iibiyo in qaar ka mid ah dukaanka deegaanka dayactirka qaar ka mid ah money.Then aad u baahan tahay si aad naftaada u hesho telefoonka cusub. No arrinta waa iPhone ah mar ama telefoonada kale, ha iloobin xogta aad ee Lugood ama iCloud gurmad. Waxaad weli iyaga dib ugu heli karaan.
Sidee? Tan iyo Apple ma ogola in aad si aad u hesho xogta ka mid ah hayaan Lugood iyo iCloud, xitaa Falanqeynta, waxaad isticmaali kartaa qalab dhinac saddexaad si aad u soo saaro. Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) waa qalab noocan oo kale ah. Just download version maxkamadda sare si aad hadda leedahay isku day ah oo lacag la'aan ah.
1-dii Jidka Ladnaansho xogta iPhone kaga imaanayo Lugood
Tallaabada 1. Dooro gurmad ah oo Macdan
Burcad barnaamijka on your computer marka aad u rakiban. Markaa waa inaad aadaa "kabsado Lugood ee kaabta faylasha" on sare ee suuqa kala hoose. Waxaa, waxaad ka arki kartaa oo dhan Lugood jira faylasha gurmad on your computer. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah lagu soo saaro. Kaliya dooro mid ka mid ah oo guji "Start Scan" button. Barnaamijku waxa uu bilaabi doonaa iskaanka iyo soo saarida faylka gurmad.
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha Leh ceshan wax kasta oo aad rabto in aad ka gurmad ah
Marka scan ka istaago (waxa ay noqon doontaa in dhowr ilbiriqsi), waxaad hadda ku eegaan kartaa dhammaan xogta ku raad raac ah mid mid, sida sawiro, fariimaha, xiriirada, qoraalada, soo wac gasho, iyo in ka badan. Iyadoo previewing, aad sax karo wax kasta oo aad rabto oo wada heli dib la mid click ee la soo dhaafay.
2-jidka Ladnaansho xogta iPhone kaga imaanayo iCloud
Tallaabada 1. Download iyo Macdan gurmad iCloud ah
Demi si ikhtiyaar ah ee "soo kabsado iCloud ee kaabta faylasha" dusheeda ee suuqa hoose barnaamijka. Markaas waxaad saxiixi kartaa in aad xisaabta iCloud by inputting ID Apple iyo sirta ah. Marka aad soo gashay, waxaad arki kartaa dhammaan faylasha gurmad aad iCloud. Dooro mid ka mid ah oo ka soo dejisan waxaa ka mid ah. Ka dib markii in, waxaad sii wadi kartaa waxa soo saarida.
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha Leh ceshan xogta ka gurmad iCloud
Hannaanka dajinta iyo soo saarida ayaa aad qaadan doonta muddo. Sug iyo naftaada nasato in mudo ah. Marka la joojiyo, oo aad ku eegaan kartaa dhammaan xogta aad iCloud file gurmad sida sawiro, xiriirada, fariimaha, jadwalka taariikhda, iyo in ka badan. Waxaad soo kaban karto, wax kasta oo iyaga ka mid ah sida aad rabto.
Sida loo iibi iPhone qiimo wanaagsan
Dhib u tirtirto iPhone Files
Raadi Information Right ee Sida loo dayactir iPhone Broken
General Options Repair iPhone jaban hoos ku qoran:
Sida loo beddel Broken iPhone 5S / 5C / 5 Screen
Sida loo beddel iPhone Home Button
Sida loo beddel iPhone Lock Button
Sida loo beddel Camera iPhone Rear
Sida loo beddel iPhone bahal Guddoomiyaha
Sida loo beddel iPhone 4s / 4 Screen
Hagaha u helno bedelkiisa iPhone Battery